Bogga ugu weyn 13 Siyaabood Oo Lagu Helo Kabo Bilaash Ah Sida Adidas, Puma & Nike | 2022 Liiska
Kabaha waxaa loo sameeyay socodka, orodka, isboortiga, boodka, iyo dugsiyada. Fursadda lahaanshaha kabaha, badankoodu si fudud bay u qaataan. Qaarkood ma haystaan, maaha inay ka hadlaan inay si fudud u qaataan. Taasi waa sababta aan uga wada hadalno sida loo helo kabo bilaash ah.
Haddii aad ka mid tahay kuwa sababaha qaarkood baahi dhab ah u qaba kabaha oo aad ku sugan tahay meel dhulka ah oo maqaalkani kaa caawin karo, markaa maqaalkan ayaa markii hore loo qoray adiga iyo kuwa sababaha kale u jeclaan lahaa inay gacmahooda ku qabtaan kabo lacag la'aan ah, iyo lugahooda oo kabo galay.
Waa kan maqaalkan oo sheegaya inaad heli karto kabahaas. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa 13 dariiqo oo lagu helo kabo bilaash ah sida Adidas, Puma, iyo Nike.
Maxay Dadku Ugu Baahan Yihiin Kabo Bilaash Ah?
Dadku waxay u baahan yihiin kabo bilaash ah maxaa yeelay bilowga, dadku ma awoodi karaan waxayna u baahan yihiin kabo haddii ay sii wadaan inay u muuqdaan dad caadi ah.
Dad badan, waa wax iska caadi ah in aad kabo leedahay; uma malayneyno xaqiiqda ah inay jiraan dad badan oo halkaas kabo la'aan ah.
Mararka qaar kabahaan la'aan ayaa noqon kara mid aad u aflagaado ah oo ka qaadata ku dhawaad ​​gebi ahaanba sharaftii aadanaha.
Dadka qaar, aniga oo kale, ayaa dareenkan si fiican u garanaya in haddii aan haysto ku filan oo aan si toos ah dadka uga caawiyo kabaha, waan samayn doonaa.
Hadda, tani waa inta aan awoodo. Waxaan ku hagi karaa dhinaca kabaha bilaashka ah.
Waa Kuwee Tijaabiyaha Badeecada Kabaha?
Tijaabiyeyaasha alaabta kabaha waa koox dad ah, kuwaas oo u badan mutadawiciin, kuwaas oo siiya warcelin ku saabsan dhowr xuduudood shirkadaha wax soo saarka kabaha iyo summadaha ka dib markay xirtaan kabaha muddo.
Maxay Tijaabiyeyaasha Kabaha Sameeyaan?
Tijaabiyeyaasha kabaha waxay kaliya u baahan yihiin inay ka dalbadaan degel internet oo sugaan in la aqbalo. Marka la aqbalo, waxay helaan tilmaamo ku saabsan sida loo helo kabahaan oo ay u helaan muuqashada lagama maarmaanka ah iyo xirashada khibrada loo baahan yahay si ay u siiyaan warcelin lagu kalsoonaan karo.
13 Siyaabood Oo Lagu Helo Kabo Bilaash Ah
#1 - Shirkadaha leh Barnaamijyada Tijaabada Kabaha
Shirkaduhu waxay inta badan siin karaan kabo lacag la'aan ah dadka ka qaybgalaya barnaamijka tijaabinta kabaha.
Shirkadaha kabaha ciyaaraha fudud badanaa waa kuwa siiya kabahaan tijaabiyaasha badeecadooda kuwaas oo dhowr baaritaan ku sameeya kabahaan si ay u bixiyaan jawaab celin.
Mararka qaarkood shirkadahaan kabaha ayaa laga yaabaa inay kaa codsadaan inaad soo celiso kabaha baaritaanka kadib, halka qaarna aysan sameyn. Tijaabiye kabaha ahaan, waxaa lagaa filayaa inaad ka jawaabto waxqabadka, qaabka, iyo raaxada kabahaan.
Ilaa iyo inta aad ka codsanayso shirkadahaan, sii warcelin, oo ku sug xeerarka dhexdiisa, waxaad yeelan kartaa naftaada kabo bilaash ah oo aan dhammaad lahayn.
Kuwa jecel Adidas, Puma, Reebok, Iyo Nike leeyihiin tijaabiyeyaasha alaabta kabaha.
#2 - Noqo Xiddig
Waxaa jira faa'iido badan oo laga helayo inaad noqoto xiddig ama qof caan ah. Dhammaanteen waan ognahay malaayiinka qaar ka mid ah dadka caanka ah ay ka helaan matalayaasha summadaha sannadkii. Kuwani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka.
Waxaa jira sinnaan weyn oo u dhaxaysa kuwa ugu taajirsan iyo kuwa ugu saboolsan adduunka, tanna waxaa laga arki karaa xitaa waxyaabaha ugu fudud sida kabaha.
In kasta oo ay jiraan carruur ku nool adduunka oo aan lahayn kabo xaalado adag iyo baahida ugu weyn, dadka caanka ah waxay kabo lacag la’aan ah ka helayaan naqshadeeyayaal qurux badan oo qiimahoodu yahay boqollaal doollar oo laga yaabo inay mar keliya ku xirtaan roog cas.
#3 –Ku Sheeg Shirkadda Runta
Mararka qaarkood shirkadaha kabaha qaarkood waxay jecel yihiin inay runta maqlaan; ka helaan warcelin daacad ah macaamiisha tijaabiyey kabaha oo u sheegi kara halka ay dhibaatooyinka ugu waaweyn ka jiraan.
Mararka qaarkood waxay bixiyaan dhiirigelin qaab kabo cusub ah macaamiisha siiya jawaab celin daacad ah.
#4 –Waxaad Noqotaa Raadiyaha Warbaahinta Bulshada
Waqtigan xaadirka ah ma ahan inay war u noqoto qof kasta oo ku jiray baraha bulshada in dadka saamaynta ku leh warbaahinta bulshada ay helaan wax lacag la'aan ah iyagoo ka hadlaya badeecadaha qaarkood.
Qaar ka mid ah shirkadaha kabaha ee doonaya inay helaan muuqashada astaanta waxay siiyaan kabo lacag la'aan ah saamileyaasha warbaahinta bulshada ee adeegsada shabakadooda taageerayaasha iyo saamileyaasha kale si ay shirkadda u siiyaan waxay rabto.
#5 –Bilaabso kabo kabo
Blogs, gaar ahaan kuwa leh niche gaar ah waxay noqon karaan qaabab aad u fiican oo dakhliga internetka marka aad bilowdo dhisidda dhagaystayaal aad u weyn oo lacag ka samayn kara.
Boggaaga kabaha wuxuu diiradda saari karaa wax kasta oo la xiriira kabaha iyo cagaha, sida helitaanka kabaha cabbirka saxda ah ama kabaha qaabaynta leh dhar kala duwan.
Waxaad la tegi kartaa wax yar oo ballaadhan oo aad abuuri kartaa baloogga moodada ama baloogga isboortiga ee kabaha sida mawduuc-hoosaad.
#6 –Ku biir Siinta
Adigoo ku siinaya badeecad bilaash ah macmiilka suurtagalka ah, adiga oo ah qabanqaabiye -bixiyaha waxaad rajaynaysaa inay wax ka iibsan doonaan shirkaddaada, kordhinta iibkaaga iyo kor u qaadista wacyiga astaanta.
Haddii aad tahay safiirka shirkadda kabaha, samafale, Samaariya wanaagsan, ama urur aan macaash doon ahayn, badeecadaha xayeysiinta ayaa ka faa'iideysan kara suuqgeyntaada. Waa alaab lacag la'aan ah oo macaamiishu jecel yihiin inay helaan.
Haddii aad muddo dheer ku sugnayd baraha bulshada, waxaad maqli lahayd wax -bixinta iyo sida ay u shaqeeyaan. Markay timaaddo bixinta warbaahinta bulshada, dadku waxay ka qaybgalaan inay guuleystaan, markan agagaarka kabaha.
Markaa, qabanqaabiyeyaasha wax siinta waxay isku dayaan inay hubiyaan in dalabyadooda ay yihiin kuwo rafcaan ku filan leh. Haddii siinta aysan ahayn mid soo jiidasho leh oo ku filan, waxaa laga yaabaa inay arkaan hawlgal hoose.
Si kastaba ha ahaatee, kabaha qaado haddii aad jeceshahay oo aad awooddo.
#7 –Ku biir Barnaamijka Kabaha Bilaashka ah
Barnaamijyada qaarkood waxay dadka siiyaan kabo lacag la'aan ah. Qaar baa kabahaas siiya kuwa u baahan.
Haddii aad ka mid tahay kuwa u baahan kabaha, waxaad heli kartaa hab aad kula xiriiri karto shirkadahaan bixiya kabaha bilaashka ah.
Waxaa jira shirkado kabo lacag la'aan ah. Soles4naf ayaa leh “inteenna badan ma fahmi karno sida ay noqon lahayd in la waayo wax asaas u ah sida kabo labo ah, laakiin malaayiin qof oo adduunka ku nool, taasi waa xaqiiqo maalin kasta ah.
Tiro kale oo badan, waa cawaaqib lama filaan ah oo masiibo dabiici ah. ”
#8 –Ku biir Shabakad
Shabakadaha ayaa ah goobo u dhigma saamaynta ugu sareysa (kuwa wax qora ama kuwa wax ku qora warbaahinta bulshada) oo wata magacyo doonaya inay la shaqeeyaan.
Waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo la mid ah suuqgeynta ku -meelgaarka ah, sida ku -xirnaanta sumcadaha aad jeceshahay, helitaanka alaab lacag -la'aan ah, iyo lacag -qaadidda dallacaadyada.
Qaar ka mid ah shabakadaha Saameeyayaasha ayaa la shaqeeya sumadaha kabaha ololaha boostada ee la kafaalo qaaday.
Ma jirto wax damaanad ah in noocyada ololahan mar walba la heli doono, laakiin waxaad ku biiri kartaa shabakadaha qaarkood oo aad baari kartaa dalabyadooda mar mar si aad u aragto waxa cusub.
#9 –In aad noqoto suuqgeeye
Ganacsadayaashu waxay ka shaqeeyaan inay abuuraan xiisaha badeecadaha iyo adeegyada waxayna dadka ka helaan inay iibsadaan aakhirka. Suuq -geeyayaashu waxay horumariyaan oo fuliyaan xeelado si loo kordhiyo macaashka kor -u -qaadista badeecad, adeeg, ama summad.
Waxay ujeedadoodu tahay inay koraan iibka iyagoo aqoonsanaya aagagga baahida iyo soo jeedinta badeecadaha iyo adeegyada kuwaas oo saamayn togan ku leh macaamiishooda iyo macaamiishooda.
Hadda ii sheeg, miyaanay ahayn wax lagu qoslo haddii aadan heli karin kabo bilaash ah intaad u suuqgeynayso shirkad kabaha?
#10 –Ka iibso kabaha
Iibinta kabaha waa hab kale oo qaloocan oo lagu helo kabo bilaash ah. Maxaa loo qaloociyay waxaad weydiin kartaa. Sababtoo ah waxaad hore u haysataa kabaha aad rabto bilaash. In kasta oo aan fahansanahay inaad wax iibsanayso si aad macaash u hesho, waxaad ku dambayn kartaa kabo bilaash ah iibka kadib.
Hal dariiqo oo lagu helo kabo lacag la'aan ah adiga oo iibinaya ayaa ah in meesha aad wax ka iibsanayso ay ku siiso wax dheeraad ah oo aad ku iibsato. Kaas ayaa loo tixgelin karaa inuu adiga yahay.
Muuqaal kale oo suuragal ah waa macmiil ku bixinaya inaad haysato mid ka mid ah kabaha. Waxay u ekaan kartaa qosol, laakiin waa run.
Waxa kale oo aad heli kartaa kabo bilaash ah inta aad iibinayso adiga oo haysta kabo hadhay oo diiday in aad gacmahaaga ka tagto iibiyaha ahaan.
#11 –Bixinta Shirkadda Kabaha
Ma tahay qof hal -abuur leh? Ma naqshadeyn kartaa kabaha? Ma haysaa nashqado aad jeclaan lahayd in lagu arko iyadoo lagu hirgelinayo summadaha kabaha aad ugu jeceshahay? Hadday haa tahay, markaa waxaad ku dhejin kartaa fikradahaas shirkadaha naqshadeeya oo sameeya kabahaas.
Inaad la timaaddo fikrado hal -abuur leh waa sahlan tahay; iibinta shisheeyaha waa adag tahay. Ganacsatada iyo maamulayaasha wax iibintu waxay inta badan u baxaan dadaal dheer si ay u muujiyaan sida fikradahooda cusubi u yihiin kuwo wax ku ool ah oo faa'iido leh.
Adiguna sidaas oo kale ayaad samayn kartaa. Ku sii wad fikraddaada. Qaado kafaalasho Haddii aadan ku guuleysan, waxaa laga yaabaa in lagu siiyo kabo lacag la'aan ah adigoo uga mahadcelinaya soo-qaadihii xusuusta-guriga.
#12 –Qof ha kuu dhiibo kabaha
Waxaa jira cilmi-nafsi ka dambeeya hadiyadda. A New York Times article waxaa laga soo xigtay isagoo leh “bixinta hadiyaddu waxay muddo dheer ahayd mawduucyada loogu jecel yahay daraasadaha ku saabsan dabeecadaha aadanaha, oo ay la socdaan dhakhaatiirta cilmu-nafsiga, cilmiga dadka, dhaqaaleyahannada, iyo suuqleyda dhammaantood miisaamaya.
Waxay ogaadeen in bixinta hadiyaduhu ay tahay wax la yaab leh oo kakan oo qayb muhiim ah ka ah isdhexgalka aadanaha, ka caawinta qeexidda cilaaqaadka iyo xoojinta xiriirka qoyska iyo saaxiibbada.
Runtii, dhakhaatiirta cilminafsiyeedku waxay yiraahdaan inta badan waa bixiyaha, halkii qofka wax qaadan lahaa uu dareemo wanaag ku saabsan bixinta. Waxaad heli kartaa qof ku siiya kabaha aad rabto.
#13 –Qeybaha La Kala Saaray
Qaybaha la soocay ee websaydhada sida Craigslist, eBay oo ah goobo dadku ku soo rogi karaan waxyaabo ay jeclaan lahaayeen inay iibsadaan ama shaqaaleeyaan oo dadku iibsadaan iyagoo gujinaya xayeysiisyada, leeyihiin qaybo lacag la'aan ah.
Qaybahaan bilaashka ah waa meelaha dadku soo geliyaan waxyaalo ay jeclaan lahaayeen in ay bixiyaan malaha maxaa yeelay waa ay ka weynaadeen ama sababtoo ah ma jecla midabka ama sababtoo ah waxaa jira wax ku saabsan kabaha oo ay ka doorbidi lahaayeen inay bixiyaan kabaha oo ay xirtaan.
Si kastaba ha ahaatee, kabaha ayaa hadda soo baxay waxayna diyaar u yihiin inay soo qaadaan dhinacyo danaynaya oo buuxiya shuruudaha dalabka.
U muuji xiisaha sida ugu dhakhsaha badan ee aad awooddo maxaa yeelay adeegsadayaasha qaarkood waxay rabaan badeeco gaar ah mana rabaan in qof kale haysto.
Tani inta badan waxay ka muuqataa qaybta xorta ah, halkaas oo heshiisyo waaweyn laga sameeyay oo dadka naxariis leh badiyaa waxay siin doonaan wax qiimo leh qof baahan.
Maqaalkani ma aha mid dhammaystiran wuxuuna aqoonsan yahay xaqiiqda ah in ikhtiyaarrada ka mid ah 13 -ka aysan u shaqeyn karin qof walba, laakiin wax waa inay ahaadaan.
Haddii aad ka mid tahay kuwa aan weli helin kabo sababtoo ah waxba ma shaqeynin, waxaan u malaynayaa in habka ugu fiican uu yahay inaad qof weydiisato inuu kuu helo.
20ka SUV ee ugu jaban | Masaafada, Qiimaha & Qiimaynta
Waxaan falanqeynay kaararka amaahda ee ugu caansan oo ay bixiyaan bangiyada ugu waaweyn, shirkadaha maaliyadeed, iyo ururada deynta ee…
Waxa jira odhaah hore oo caadiyan laga dhex helo dadka reer Nigeria oo odhanaysa "na inside shit money dey". Tani maxay ka dhigan tahay…